Soo dejisan Reezaa MP3 Converter 9.4 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaReezaa MP3 Converter
Bogga rasmiga ah: Reezaa MP3 Converter
Reezaa MP3 Converter – waa software si loo badelo faylalka maqalka iyo fiidiyowga qaabab faylasha heesaha. Software wuxuu ka shaqeeyaa noocyada faylasha noocaan oo kale ah sida AVI, MP4, WMV, FLV, MOV, 3GP iyo kuwo kale oo badan, iyo noocyada noocan oo kale ah sida MP3, WMA, WAV, FLAC, OGG, iwm. Reezaa MP3 Converter waxay bixisaa qaab beddelaad fudud, kaas oo aad u baahan tahay inaad sameyso xuduudaha sida barkin, qashinka iyo codka maqalka, kadibna bilow hawlgalka. Kumbuyuutarku wuxuu taageersan yahay jilitaanka iyo darajooyinka marka la dooranayo ama la beddelayo faylasha, sidaa daraadeed waa ku haboon tahay in la isticmaalo habka loo shaqeeyo. Reezaa MP3 Converter sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku dhejiso ama maqasho cod, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad sheegto wakhtiga lagu jiro muddada codka maqnaanayo. Software wuxuu la yimaadaa interface interface si fudud u fiican oo loogu talagalay dadka isticmaala heer qibrad kala duwan.
U isticmaalaan faylasha maqalka si hababka kale ee muusikada
Ka saar raadadka maqalka ee fiidiyaha
La socoshada habka isdhaafsiga
Cunto iyo maqal cod
Soo dejisan Reezaa MP3 Converter
Faallo ku saabsan Reezaa MP3 Converter
Reezaa MP3 Converter Xirfadaha la xiriira